Thermorecetas बाट उत्तम हेलोवीन व्यंजनहरु ThermoRecines
यो आउँदैछ ... हेलोवीन २०२० !!
इरेन आर्कास | | हेलोवीन, Years बर्ष भन्दा बढी
र त्यहाँ केहि बाँकी छैन ... यो आउँदैछ ... बर्षको सबैभन्दा अन्धकार र रमाइलो रात ... हेलोवीन 2020!! Thermorecetas बाट हामी तपाईलाई साथको खानाको तयारीको साथ त्यस रात सब भन्दा रमाईलो र आश्चर्यजनक व्यंजनहरुका साथ दिन चाहन्छौं। हिट प्ले र मजा लिनुहोस्!
चकलेट क्रीम कब्रिस्तान - चकलेट क्रीमको साथ बनाइएको एक नुस्खा र हेलोवीनको लागि सजाइएको। बच्चाहरू भाग लिनका लागि सजिलो बनाउन र रमाईलो गर्नका साथै एक अपरिवर्तनीय र स्वादिष्ट स्वाद पनि उनीहरूले यसलाई कुकीहरू वा स्पन्ज केकसँगै राख्न सक्दछन्।
मन्डारिनहरू चकलेट माउसले भरिएका छन् - यो नुस्खाले तपाइँलाई हेलोवीन रातको लागि मिठो बनाउँन मद्दत गर्दछ: ट्याger्गेरिनहरू चकलेट कस्टर्डले भरिएको। यो धेरै सजिलो र स्वादिष्ट छ। र बच्चाहरूले तपाइँलाई मिनीक्याबहरूको अनुहार रंग्न मद्दत गर्न चाहन्छन्, जुन वास्तवमा ट्याger्गेरिन हो।
दानव कुकीहरू - ती बदाम कुकीहरू हुन् जुन दिनको परम्परागत मिठाईहरूको स्वाद सम्झन्छन् सबै सन्तहरू। त्यसोभए यदि तपाईं उत्सव मनाउनुहुन्न हेलोवीन वा यदि तपाईं घरमा बच्चाहरू छैनन् भने, जे भए पनि गर्नुहोस् (सजावट बिना) कि तपाईं तिनीहरूलाई आनन्द लिइरहनु भएको छ।
भरिएको सेतो चकलेट भूतहरू - सेतो चकलेट भूत मस्कारपोन र oreo कुकीजले भरिएको छ। बच्चाहरु संग हेलोवीन मा गर्न को लागी आदर्श।
ज़ोंबी हात - चौंकाउने जोम्बीको हात ओभनमा पकाइएको छ र यसको साथ आलूको साथ। हेलोवीनका लागि तपाइँका तालिकाहरू सजाउन आदर्श।
भूतिया औषधि औषधि - भूतली औषधि कुनै पनि हेलोवीन पार्टीको लागि उत्तम गोप्य पेय हो।
आमा कुकिज - हेलोवीन पार्टीहरूमा साझेदारी गर्न हास्यास्पद आमा कुकिजहरू। बच्चाहरूले तिनीहरूलाई बनाउन मद्दत गर्न सक्दछन्, हामीसँग धेरै रमाइलो समय हुनेछ!
खूनी चूहों - खूनी चूहों एक उत्तम हेलोवीन डिश हो। तिनीहरू बच्चाहरूले मन पराउने टमाटर सॉसको साथ घरेलु ग्लुटन-मुक्त मीटबलहरू भन्दा बढि केहि हुन्।
सॉसेज ममीहरू - डरलाग्दो सॉसेज ममीहरू, शॉर्टकट पेस्ट्री वा पफ पेस्ट्रीको साथ बनेको छ। हेलोवीन र बच्चाहरूको लागि आदर्श।
चीज चीज - बदाम र जैतूनको साथ चीज चीजहरू डोरिटोस वा नाकोससँग लिनका लागि, जुन हेलोवीन अपेरिटिफका लागि हास्यास्पद ब्याट आदर्श हो।
अन्य रेसिपीहरू पत्ता लगाउनुहोस्: हेलोवीन, Years बर्ष भन्दा बढी
लेखको पूर्ण मार्ग: थर्मोरसेटास » लेखहरू » विशेष व्यंजनहरु » हेलोवीन » यो आउँदैछ ... हेलोवीन २०२० !!
किचन लेजर थर्मामीटरहरू: के यसको लायक छ?